ESTRAM 48 ယူဆောင်သွားမည့်ဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်း RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေဂျော့ဘ်ESTRAM 48 ဘတ်စ်ကားမောင်းသူကိုခေါ်ဆောင်သွားမည်
07 / 02 / 2020 ဂျော့ဘ်, အထွေထွေ
Eskisehir တွင်အလုပ်ရှာသူများအတွက် EstKUR မှတစ်ဆင့် Metropolitan မြူနီစီပယ်၏တွဲဖက်များဖြစ်သော Estram Light Rail Systems ။ စုဆောင်းမှုကြော်ငြာ 48 ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ကြေငြာချက်အရအတွေ့အကြုံရှိဘတ်စ်ကားမောင်းသူအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခန့်သည်ဤကြေငြာချက်ကိုလျှောက်ထားနိုင်သည်။
ပွင့်လင်းသောအနေအထားအတွက်လျှောက်လွှာများကို 05.02.2020 - 08.02.2020 အကြားယူလိမ့်မည်။ အသုံးပြုခြင်း ESTRAM ရထားလမ်းစနစ်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း။ နေကြပါပြီ။ Inc က '' လုပ်ရမည်
လျှောက်ထားသူများ၏ CV ကိုအကဲဖြတ်ပြီးနောက် ESTRAM ရထားလမ်းစနစ်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းသည်သင့်တော်သည်ဟုယူဆသောသူများသည်။ နေကြပါပြီ။ ၁၀း၀၀-၁၄း၀၀ နာရီအကြား၊
ESTRAM ကားမောင်း ၀ ယ်ယူရန်အတွက်လျှောက်ထားမှုလိုအပ်ချက်များ
Eskişehir Metropolitan မြူနီစီပယ်ယာဉ်မောင်းစုဆောင်းမှုလျှောက်လွှာအခြေအနေများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်:
E class (Old), D class (New) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊
တစ် ဦး psychotechnical စာရွက်စာတမ်းရှိခြင်း
၄ င်းတို့တာ ၀ န်များကိုမထမ်းဆောင်ရန်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများမရှိခြင်း၊ အများပြည်သူပိုင်ဆေးရုံများ (စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာနအပါအ ၀ င်) မှ“ ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်း” ဟူသောစကားစုပါသောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာကိုလက်ခံရရှိရန်။
ထို့အပြင်“ ဒေသဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကအုပ်ချုပ်ရေးများ၊ မြူနီစီပယ်များ၊ တွဲဖက်များနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၏ ၀ န်ထမ်းခန့်အပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ” သည်ပုဒ်မ ၄ တွင်ဖော်ပြထားသောအရည်အချင်းများရှိရမည်။
ဝယ်ယူ Make မှဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာ ESTRAM န်ထမ်းအဖြစ် 18
အလုပ်-site ကိုဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာ ESTRAM အတွက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်
လ Award ဆု၏သူရဲကောင်းဗိုလ်ကြီးယာဉ်မောင်းယာဉ်မောင်း
IETT High School တွင်ဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်းဝယ်ဖျော်ဖြေနေပါသည်!
အဆိုပါ 100 ESHOT Soyer Verdi ညွှန်ကြားချက်များတွင်အမျိုးသမီးများဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာကိုရယူပါရန်
Mersin ရှိ 73 Bus Drivers များ ၀ ယ်ရန်အတွက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းပြီးဆုံးသည်
၇၄၄ ဦး သည် Mersin Metropolitan Municipality မှဘတ်စ်ကားမောင်းသူ ၁၈၄ ယောက်အား ၀ ယ်ယူခဲ့သည်
Professional ကကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုစာမေးပွဲ၏ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်းလက်မှတ် Continues
Eskisehir ရှိကောင်းသောသတင်းကောင်းများ!! အလုပ်ခန့်ရန်အမျိုးသမီးဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်း
Estrada ကျွန်မရဲ့စီးပွားရေး 65 ယာဉ်မောင်းများ၏ဝယ်ယူ Make မှ
Alanya Antalya မီးရထားစီမံကိန်းစီမံကိန်းအတွက်Dahaoğluထံမှအကူအညီ